Imfazwe ye-Seven Pines kwimfazwe yombutho
I-Battle of Seven Seven yenzeke ngoMeyi 31, 1862, ngexesha leMfazwe yaseMelika (1861-1865) kwaye yayimela phambili phambili kuMajor General George B. McClellan ngo-1862 Peninsula Campaign. Ekuvukeni kokunqoba kwe-Confederate kwi- First Battle ye-Bull ku-Julayi 21, 1861, uluhlu lweenguqu olusungulwe kumyalelo omkhulu we-Union. Ngenyanga elandelayo, uMcClellan, owawunqobile uluhlu lwamancinci olusentshona entshonalanga yaseVirginia wabizwa eWashington, DC kwaye wayenomsebenzi wokwakha umkhosi waza wabamba i-Confederate capital in Richmond.
Ukwakha i-Army yasePomomac ukuba ihlobo kunye nokuwa, waqala ukucwangcisa kwakhe u-Richmond kwintwasahlobo ka-1862.
Ukuze afinyelele iRichmond, uMcClellan wayefuna ukuthutha umkhosi wakhe phantsi kweChesapeake Bay ukuya kwi-Union-eyayibanjwe i-Fortress Monroe. Ukusuka apho, kwakuza kususa iPeninsula phakathi kweJames neYork York ukuya eRichmond. Le ndlela yayiza kumvumela ukuba avele kwiplank kwaye agweme ulawulo lukaJoseph E. Johnston enyakatho yaseVirginia. Ukuqhubela phambili phakathi no-Matshi, uMcClellan waqalisa ukuguqula amadoda angama-120,000 kwiPeninsula. Ukuchasisa phambili kweManyano, uMphathi Jikelele uJohan B. Magruder wayenamadoda angama-11 000-13,000.
Ukuzibeka ngokwakhe kufuphi ne-Old American Revolution e- Yorktown , iMagruder yakha umgca wokuzimela owela ngasemnxwemeni waseWarwick waza waphela eMelberry Point. Oku kwaxhaswa ngumgca wesibini ukuya ngasentshonalanga owadlula phambi kweWilliamsburg.
Ukungabi namanani aneleyo kumntu opheleleyo kwiWarwick Line, iMagruder isebenzisa iintlobo ezahlukeneyo zeetatrics ukulibazisa uMcClellan ngexesha lokuvinjelwa kweYorktown. Oku kwavumela ixesha likaJohnston ukuba lihambe ngasentla kunye nenqwaba yomkhosi wakhe. Ukufikelela kwindawo leyo, i-Confederate imikhosi yanyuka yaba ngama-57,000.
Ukuqaphela oku kungaphantsi kwesiqingatha somyalelo kaMcClellan kwaye ukuba umlawuli weNyunyana wayecwangcise ibhomu ye-bombardment enkulu, uJohnston wayala i-Confederate ibutho ukuba ihambe kwiWarwick Line ngobusuku boMeyi 3.
Ukumboza ukurhoxiswa kwakhe kunye ne-bombardment yamatye, amadoda akhe ahamba angaboni. Ukuhamba kwe-Confederate kwafumaniswa ngentsasa elandelayo kunye noMcClellan ongakulungelelwanga olwaBrigadier General uGeorge Stoneman kunye nabanqwelwe phantsi kweBrigadier Jikelele u-Edwin V. Sumner ukunyusa ukusukela.
Ehliswe ngenxa yeendlela ezidaka, uJohnston wayala uMajameli uJames James Longstreet , olwahlukana naye njengomgcini wamasosha, kumntu wecandelo lokuzimela eWilliamsburg ukuthenga ixesha lokubamba iCompederates (Imephu). Kwi-Battle of Williamsburg ngomhla we-5 kuMeyi, amajoni e-Confederate aphumelela ukulibazisa i-Union. Ukunyuka ngasentshonalanga, uMcClellan wathumela iinqanaba eziliqela ngaphesheya kweYork River ngamanzi ukuya ku-Eltham's Landing. Njengoko uJohnston wabuyela kwi-defense yaseRichmond, amaManyano aseManyeni athuthuka uMlambo wasePamunkey waza waqulunqa njengoluhlu lwesiseko sokubonelela.
Ukugxininisa umkhosi wakhe, uMcClellan wayedla ngokukhawuleza ukufumana ingqiqo engakholwanga eyakhokelela ekubeni akholelwe ukuba uninzi kakhulu kwaye wabonisa ukuqaphela okuza kuba yinto ephawulekayo yokusebenza kwakhe. Ukuqhayisa umlambo waseChikkahominy, umkhosi wakhe wawujongene neRichmond malunga neyesibini kwisithathu samandla ayo ngasentla komlambo kunye nesithathu kwisantya.
Ngomhla we-Meyi 27, u-Brigadier General u-Fitz John Porter u-Corps wenza intshaba eHanover Court House. Nangona ulwalamano lweNyunithi, ukulwa kwakhokelela uMcClellan ukuba akhathazeke ngokukhuselekileyo kwiplanethi yakhe yangakwesokudla kwaye wamenza enganqweneli ukudlulisela amabutho amaninzi aseMackahominy.
Ngaphakathi kwemigca, uJohnston, owayeqaphela ukuba umkhosi wakhe awukwazi ukumelana nokuzingqingwa, wenza izicwangciso zokuhlasela amabutho kaMcClellan. Ekubona ukuba uSihlalo weGrigadier Jikelele uSamuel P. Heintzelman we-III Corps kunye no-Brigadier General u-Erasmus D. Keyes 'IV Corps ayehlala ngasecaleni kweChickahominy, wayezimisele ukuphonsa amabini emithathu yomkhosi wakhe. Isithathu esisele sisetyenziselwa ukubamba amanye amabhunga kaMcClellan endaweni enyakatho komlambo. Ukulawulwa kobuchule bokuhlaselwa kwadluliselwa kuMagosa Jikelele uJames Longstreet . Isicwangciso sikaJohnston sabiza amadoda aseLongstreet ukuba awele kwi-IV Corps ukusuka kwimizila emithathu, ayitshabalalise, aze ahambe enyakatho aze aqhekeza i-III Corps kumlambo.
Imikhosi & Abalawuli:
Jikelele uGeorge B. McClellan
Jikelele uJoseph E. Johnston
Jikelele uGustavus W. Smith
Ukuqhubela phambili ngoMeyi-31, ukuphunyezwa kwecebo likaJohnston kwahamba kakubi kwasekuqaleni, ngokuhlaselwa kwaqala iiyure ezintlanu emva kwexesha kwaye kunye neqhezu leminye imida ejoliswe kuyo. Oku bekubangelwa yi-Longstreet esebenzisa indlela engafanelekanga kunye noMajameli Jikelele uBenjamin Huger ufumana imiyalelo engakhange inike ixesha lokuqala lokuhlaselwa. Esikhundleni ngexesha njengoko kulandelwe, iCandelo likaMajor General DH Hill lindele ukuba abahlobo babo bafike. Ngo-1: 00 ntambama, iNtaba yathatha izinto ezandleni zakhe kwaye yaqhubela phambili amadoda akhe malunga nohlu lwaBrigadier General Silas lweCycle IV Corps.
Ukugxotha iminyango ye-Union, i-Hill yamadoda yaqala ukuhlaselwa kumhlaba we-Casey entshonalanga ye-Seven Pines. Njengoko uCatheriney wabiza ukuqinisekiswa, amadoda akhe angamava alwa nzima ukuze agcine isikhundla sakhe. Ekugqibeleni, bawa emgca wesibini wehlabathi emhlabeni kwi-Seven Pines. Ukucela uncedo oluvela eWallstreet, Hill yafumana elinye iqela lokuxhasa imizamo yakhe. Xa kufika la madoda malunga ne-4: 40, i-Hill ihambelana nomgca wesibini weManyano (Imephu).
Ukuhlaselwa, amadoda akhe ahlangabezane neengxowankulu zeCandeloy kunye nezoBrigadier Generals uDarius N. Couch noFilip Kearny (III Corps). Ngomgudu wokukhupha abakhuseli, i-Hill ilandele iirejimenti ezine ukuba zizame ukujika i-IV Corps 'ngezantsi. Olu hlaselo lwaye lwaphumelela kwaye lwaphoqelelwa imikhosi yamaManyeneyo ukuya eWilliamsburg Road.
Ukumanyaniswa kweManyanzelo kungekudala kwanyanzeliswa kwaye ukuhlaselwa okulandelwayo kwatshatyalaliswa.
Ukufunda ngokulwa, uJohnston waqhubela phambili kunye neentshaba ezine ezivela kwiCandelo likaBrigadier General William HC Whiting. Ngokukhawuleza bahlangana noBrigadier General uWilliam W. Burns u- Brigadier General uJohn Sedgwick 's II Corps kwaye waqala ukuyikhupha. Ukufunda ngokulwa kumzantsi weChickahominy, uSumner, olawula ii-II Corps, wayeqale ukuhambisa amadoda akhe phezu komlambo ovule imvula. Ukubandakanya intshaba enyakatho ye-Fair Oaks Station kunye ne-Seven Pines, intsalela yamadoda akwaSedgwick yakwazi ukumisa i-Whiting ize ilahlekelwe yilahleko.
Njengoko ubumnyama beza kulwa imfala kwaphela kwimizila. Ngeli xesha, uJohnston wabethwa ehlombe lasekunene ngombhobho kunye nasesibhoxweni se-shrapnel. Ukuwa ehashe lakhe, waqhekeza iimbambo ezimbini kunye nehlombe lakhe lasekunene. Watshintshwa nguMagosa Jikelele uGustavus W. Smith njengomlawuli wamabutho. Ngelo busuku, ulwahlulo lukaBrigadier General Israel B. Richardson II Corps lwafika lwaza lwaba phakathi kwinqanaba leManyano.
Ngentsasa elandelayo, uSmith waqala ukuhlaselwa kwi-Union line. Ukuqala malunga ne-6: 30 ekuseni, ezimbini zee-brigades ze-Huger, ezikhokelwa ngabaphathi bamaGrigadier Generals uWilliam Mahone noLee Armistead, zithatha imigca kaRichardson. Nangona babephumelele okokuqala, ukufika kukaBrigadier General uDavid B. Birney wavala ingxaki emva kokulwa. Ama-Confederates abuya kwaye ukulwa kwaphela ngo-11: 30 ekuseni. Kamva ngaloo mini, uMongameli we-Confederate uJefferson Davis wafika kwikomkhulu likaSmith.
NjengoSmith wayengenakunqununu, ecaleni komonakalo wokuphazamiseka, ngenxa yokulimala kukaJohnston, uDavis wakhetha ukuba athathe isikhundla sakhe ngomcebisi wakhe wezempi, uGeneral Robert E. Lee (Imephu).
I-Battle ye-Seven Pines yabiza uMcClellan 790 wabulawa, ama-3,594 anxinzekile, kunye nama-647 athathwe / alahlekile. Ukulahlekelwa kwama-Confederate kwabalelwa ku-980, aba-4 749 balimala, kunye no-405 abanjwe / abalahlekileyo. Imfazwe ibonakalise indawo ephakamileyo yeMcClellan Peninsula Campaign kwaye ukuxhatshazwa okukhulu kwashukumisa ukuzithemba komlawuli we-Union. Kwixesha elide, lalinomthelela omkhulu kwimfazwe njengoko ukuphazamiseka kukaJohnston kwaholela ekuphakameni kukaLee. Umlawuli onobudlova, u-Lee wayeya kuhola i-Army yaseNyakatho Virginia ukusalela kwimfazwe kwaye wayinqoba ukunqoba okubalulekileyo kwi-Union forces.
Kwiiveki ezingaphezu kweeveki emva kwee-Seven Pines, umkhosi weManyano wahlala ungenzi lutho kwaze kwaba yilapho imfazwe yahlaziywa kwiMfazwe yase-Oak Grove ngoJuni 25. Le mpi yabonakalisa ukuqala kweeNtsuku ezisixhenxe zeeMfazwe ezabona uLee amandla kaMcClellan e-Richmond aze ahlawule I-Peninsula.
Imfazwe Yomthonyama yaseMerika: iMfazwe yeMlambo yamatye
Iindawo ezinzulu ezixhomekeke kwiMfazwe yaseMelika
Imfazwe YaseMelika: Omkhulu uGeneral William F. "Baldy" Smith
Imfazwe Yomthonyama yaseMerika: iMfazwe yaseChattanooga
Indlela yokuqokelela kunye nokulungiselela i-Pecan okanye i-Hickory Nut yokutyala
Abazali Bam Abafuni Ukuba Ndibe Wiccan - Ngaba Andikwazi Ukuthetha Amanga?
Iingoma eziphezulu zeR & B / Soul ngokuphathelele Ukukhohlisa Abathandi
Ukudibanisa Abantu Ngenxa yokuDumisa kukaDonald Trump
Ezi zifundo ezi-7 ezilungileyo zoBomi zikufundisa indlela yokuzonwabisa ubomi
Ukudibanana neAnglish Angel Azrael, Ingelosi yokuguqulwa nokufa